ओलीको ‘गुरिल्ला’ प्रेम, नौटंकी नै हो ? – Mission
ओलीको ‘गुरिल्ला’ प्रेम, नौटंकी नै हो ?
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ २०, २०७७
– अछुत कोपिला
नेपालमा १० वर्ष चलेको जनयुद्धलाई सबैभन्दा बढी कसैले विभिन्न तवरले प्रहार ग¥थ्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् । उनी विगतमा माओवादीको जनयुद्धलाई विभिन्न तौर तरिकाबाट छेड हान्दै आएका थिए । ओली माओवादी लडाकुलाई‘गुरिल्ला’को संज्ञा दिन्थे । माओवादीले पनि ओलीलाई प्रमुख शत्रु मान्थ्यो । ओलीले हिजो पनि जनयुद्ध स्वीकार गरेका थिएनन् । पार्टी एकतापछि पनि स्वीकार गरेनन् ।अब पनि जनयुद्धलार्ई स्वीकार गर्ने कुनै छाँट देखिदैन ।
उनले बरु हिन्दु राज्य स्वीकार गर्लान् । माओवादीले उठाएको धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण र संघीयता ‘गाईको मासु खालान्’ स्वीकार गर्नेछैनन् भन्ने कुराको पुष्टि ओलीले धेरै पटक गरिसकेका छन् ।संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अरुचि र उनका किचन क्याविनेटका ‘राजनीतिक गुरिल्ला र सिनो सेना’ हरुका अभिव्यक्ति र स्वयम ओलीका अभिव्यक्तिहरु संघीयता विरोधी देखिन्छन् ।
संविधानले नै स्वीकार गरेकार शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त विपरित दोस्रोपटक सत्तामा पुगेपछि उनले आर्जन गर्न खोजेको शक्ति केन्द्रीत गतिविधिले समेत यी कुराहरुको पुष्टि गर्छ । यो बीचमा ओलीले प्रदेश सरकार संघीय सरकारका इकाइ हुन् भने,उनी पक्षीय नेता निरु पालले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिन् । निरु पाल ती नेता हुन् । जो ओलीलाई बाबा सम्बोधन गर्छिन् । उनका धर्मपुत्र मानिने गोकुँल बाँस्कोटा तारन्तार यस्ता अभिव्यक्ति दिदैँ आएका छन् ।
कुनै समय धर्मलाई अफिमसँग तुलना गर्ने कम्युनिस्टको खोल ओडेका ओली राम नेपालको चितवनस्थित ठोरीमा राम मन्दिर बनाउन उद्धत देखिनु, पशुपतिनाथको दर्जन गर्न जानुले पनि उनी कम्युनिस्ट शासन चाहदैनन् प्रस्ट हुन्छ । यस्तै उनले नारायणहिटी अगाडि उनकै शब्दमा अभूतपूर्व सभाको आयोजना गर्दै छन् । यसलाई धेरैले ओलीमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको ‘धर्म प्रेम’ले राजावादीहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गरिरहेको रुपमा अ¥थ्याइरहेका छन् । पूर्वपञ्चहरुको मन जित्न पूर्वराजाको दरबार अघिल्तिर उभिएर विरोधीमाथि औंला उठाउने यत्न ओली गर्दैछन् ।
ओलीको ‘गुरिल्ला’ प्रेम
ओली अहिले राजनीतिक उदय र वा पतनको निकै गम्भीर मोडमा आएर उभिएका छन् । पुस ५ मा संसद विघटनको निर्णयपछि सत्ताधारी नेकपा विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा आएको छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको समूह एकातिर छ भने उनी अर्को खेमामा छन् ।दुवै पक्षले एकअर्कालाई अराजनीतिक गालीगलौज गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले एकातिर माओवादी आन्दोलनलाई होच्याइरहेका छन् । अर्कातिर उनको निशानामा उनले पहिला भन्ने गरेका माओवादी लडाकु ‘गुरिल्ला’ मार्फत प्रचण्डलाई प्रहार गरिरहेका छन् ।
ओली अहिले रणनीतिक रुपमा लडाकुहरुको अभिभावक आफू भएको प्रमाणित गराउन र प्रचण्डले केही पनि नगरेको भन्ने देखाउन उनीहरु विभिन्न कार्ड फ्याकिरहेका छन् । पार्टी विभाजनपछि आएर ओली एकाएक पूर्वलडाकुप्रति सहानुभूतिशील देखिनुको मुख्य कारण राजनीतिक लाभको खोजी बाहेक अर्को हुन सक्दैन । उनले ‘एक तीर,दुई शिकार’को अस्त्र प्रयोग गरिरहेको बुझ्न आइतबार कुर्न परेन । उनले पूर्वलडाकुलाई राज्य साथमा रहेको देखाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन र प्रचण्डलाई नैतिक संटकमा पार्न उद्धत भएको देखिन्छ ।
अर्कातिर उनले पार्टी विभाजनपछि आफ्नो पक्षमा लागेका माओवादी पृष्ठमूभिका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर राउमाझी, लेखराज भट्ट, प्रशु शाह लगायतका नेताहरुलाई आस्वस्त पार्न पनि यस्तो उपाय अपनाएको देखिन्छ । ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति ‘जनयुद्ध कुहिएको फर्सी हो ?’ भन्ने भनाइबाट केहि झक्किएको छन् । सत्ता समिकरणमा पूर्व सुप्रियो कमाण्डर प्रचण्डको साथ छाडेका उनीहरु ओलीको अभिव्यक्तिपछि नैतिक दबाबमा परिरहेका छन् ।
अहिले प्रचण्ड पक्षमा लागेका पूर्वमाओवादी नेता वर्षमान पुनले एक कार्यक्रममा त ‘राम बहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीलाई ओलीका ढेडु बाँदर’ समेत भन्न भ्याए । ओलीले खासगरि पूर्वबालडाकु र पूर्वलडाकुहरुलाई ताकेको देखिन्छ । करिब चार हजार भन्दा धेरैको संख्यामा रहेका उनीहरुको साथ ओलीलाई चाहिएको छ । यदि उनीहरुको साथ पाएमा ओलीलाई प्रचण्डलाई होच्याउन झन सजिलो हुनेछ ।
अहिले सम्म औपचौरिक रुपमा ओलीको समुहमा नगएपनि पूर्वलडाकुकानेताहरुको अभिव्यक्ति ओलीलाई समर्थन गर्ने देखिन्छन् । यसै शिलशिलामा ओलीको एक पूर्वलडाकुसँगको अडियो टेप समेत बाहिरियो । त्यसमा उनीहरुको संवाद यस्तो थियो,
तपाईंहरू आफूलाई अयोग्य नभन्नुस् है, अयोग्य लडाकु भनेको लडाकु हुन अयोग्य होइन, तोकिएको मापदण्ड नपुगेको मात्र हो’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडो स्नेह देखाउँदै एक पूर्व बाललडाकुलाई सम्झाएका छन् ।
ओली अहिले सत्ता गुम्ने खतरा महशुस गरिरहेकको हुनुपर्छ । उनलाई हत्या अभियोगमा अदालतको फरार सूचिमा रहेका कालीबहादुर खामहरुसँग बालुवाटारमा आस्वासनका कार्ड फालिरहेका छन् । प्रभु शाह, बालकृष्ण ढु्ंगेल,जस्ता आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरूलाई संरक्षण दिनुको मूल उद्देश्य भनेको अतिरिक्त शक्ति आर्जन नै हो । ओलीमा असिमित शक्तिको भोक छ ।
ओलीको पूर्वलडाकु प्रेमप्रति स्वयम प्रचण्ड पनि झस्किएका छन् । उनले असहजता महशुस गरेको देखिन्छ । उनले केही दिन अघि काठमाडौँको एक भेलामा पुगेर ओलीको भनाइको प्रतिक्रिया दिदै भनेका थिए, ‘प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे, केपीले हेर्ने रे ! नाटक पनि कति गर्न जानेको हो । लाजै लाग्ने । त्यसैले जनयुद्धका साथीहरू ओलीको कुरामा गम्भीर नहुनुहोला । कमरेडहरू तपाईंहरूको योगदानको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेख्ने काम भएको छ । त्यसलाई कसैले कालो नपोतौं ।’
यस्ता गतिविधिले प्रष्टै हुन्छ ,ओलीले आफ्नो राजनीतिक लाभको लागि हिजो सक्दो सराप गर्ने जनयुद्धका योद्धाहरुलाई प्रयोग गरेर हिजो माओवादीहरुले भन्ने गरेजस्तै ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ रणनीति मार्फत मार्फत विरोधी खासगरि प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन उनले राज्यको पद र शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरुको लागि भन्दै प्रसस्त तयारी समेत गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वलडाकुलाई परिचयपत्र वितरण तथा सम्मान गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा तीन मन्त्रीको कार्यदल बनिसकेको छ । पूर्वलडाकु, घाइते र शहीद परिवारले निःशुल्क उपचार र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन् । यसमा स्वयम् ओली देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा नभइ आफ्नो राजनीति लाभको लागि पनि सकारात्मक देखिन्छन् ।
ओलीको नारायणहिटी भेलाको अर्थ
दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणपछि बालुवाटार मै सीमित भए ओली । यति सम्म की उनी ढेड समयको दुरीमा रहेको सिंहदरबार समेत पुगेनन् । उनले बालुवाटारबाटै सत्ता सचाइरहेका छन् । पछि कोरोना कहरका समयमा पनि यहि बसे । करिब आठ महिनापछि भने ओली बल्ल बाहिर झुल्किन थाले । त्यसलगत्तै ओलीले ५ पुसमा संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि शान्त रहेको देश, राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा सबै सडकमा आए । उनको सत्ता प्रवृत्ति, सरकार र उक्त कदमको व्यापक विरोध हुन थाल्यो ।
नेकपा कै ओली इतर पक्षले बृहत आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल पनि सडक मै छन् ।सायद ओलीले यो कदमबाट सत्ता सुरक्षाको कुनै संकेत देखेनन् ।उनी आफूको फेला, सभाहरुमा सहभागी हुन थाले ।ओली यसरी प्रकट हुन थाले की जुन कुरा उनका अन्धभक्तहरुले समेत भेउ पाएका थिएनन् । उनी जहाँ जान्छन् आगो ओकल्छन् । खासगरी उनले विरोधीलाई लक्षित गरी प्रहार गर्ने शैली र उनको शब्द चयन गर्दा कुनै पनि नागरिकलाई उनी देशको प्रधानमन्त्री हुन भन्ने भान नै हुँदैन ।
उनी सभामा ओली राजनीतिक जोकर जस्ता देखिन्छन् ।तल बसेर उनका प्रजाहरु मुटु फुट्नेगरी हास्ँछन् ।उनका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, ओलीलाई देश, जनता र व्यवस्थाको कुनै प्रवाह छैन ।यसैक्रममा उनी सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी सम्म पुगे ।काठमाडौँमा त उनका हास्य सभाहरु दैनिक भइरहन्छन् ।
हुँदा–हुँदा उनी नारायणहिटी सम्म पुग्ने भएका छन् । उनको पक्षको भेलाको हिजो राजाहरुले प्रयोग गर्ने थलो नारायणहिटीमा २३ गते हुदैछ । त्यसलाई उनले भेला कस्तो हुन्छ देखाइदिने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । उनी पक्षका नेताहरु अहिले त्यसको तयारीमा समेत सत्रिय छन् । यो जस्तो एतिहासिक र दुर्लभ अवस्था हो, बहुदल अघिका पञ्च¥यालीहरु सम्झाउने गरी आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न पहिलो पटक सडकको सहारा लिदैछन् ।
भेलाको उनको लागि जुन स्थानको चयन गरेका छन् । त्यो फगत सडक मात्रै होइन । हिजो राजाहरुले प्रयोग गर्दै आइरहेको राजदरबार हो । उनी संसद विघटनपछि सत्ता संकटको अवस्थामा छन् । यस अघि पनि संसद विघटनको निर्णय गरेका शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, र मनमोहन अधिकारी समेत शक्ति प्रदर्शनको लागि भन्दै अदालतको निर्णय अघि सडकमा ओर्लिएका थिएनन् ।
सत्ता नै सडकमा ओर्लिर्एर ‘देखाउन’ खोजेको सभाको मञ्च नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको छेउमा राखेर ओलीले आउँदो २३ गते महेन्द्रको सालिकतिर फर्किंदै विरोधीहरुलाई चोर औला देखाउँदै धारे हात लगाएर गालीगलौज, विरोध र भाषण गर्नेछन् । हिजो दरबारिया र राजतन्त्रलाई माया गर्नेहरूका लागि पुरानो शासन व्यवस्था सम्झाउने ठाउँमा कम्युनिस्ट प्रधामन्त्री ओलीले के के भन्लान बेग्र प्रतिक्षाको विषय छ ।
धेरैले ओलीको स्थान चयनलाई उनको राजनीतिक भविस्य र व्यवस्थासँग जोडेर हेरेका छन् । उनका पछिल्ला गतिविधि र स्थान छनौटले गहिरो राजनीतिक असर देखिन्छ । पछिल्लो समय ओलीमा देखिएको धार्मिक चरित्रले धेरै झल्किएका छन् । धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको उपलब्धिविरुद्धमा ओलीको पछिल्लो गतिविधिकै सिलसिला स्वरूप पनि हेरिएको यो भेला के सन्देश देला त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
अत ओलीको गुरिल्ला प्रेमदेखि धार्मिक चरित्र सम्मका ओली गतिविधिले आम नागरिकले शंका गर्ने र विस्वस्त भएर टुलुटुलु हरेर मात्रै बसिरहने अवस्था देखिदैन ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ २०, २०७७ 11:31:10 AM |
Posted in Flash news, पाठक पक्रिया, प्रदेश नं. ५, मुख्य समाचार, राजनीति, समसामयिक, समाचार, साहित्य
Prevसम्पादकीय :सकारात्मक प्रस्ताव
Nextसूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गरिदै